Dhakhaatiirta Switzerland Dhawaan Waxay U Qori Karaan Cannabis Bukaanka • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Dhakhaatiirta Switzerland waxay dhakhso u awoodi doonaan inay qoraan xashiishadda bukaanka
Dhakhaatiirta Switzerland waxay dhakhso u awoodi doonaan inay qoraan xashiishadda bukaanka
albaabka Ties Inc. 31 Oktoobar 2019
maqaal by Ties Inc. 31 Oktoobar 2019
Xashiishka loogu talagalay dareenka dhabta ah ee Zwitserleven. Dhakhaatiirta Switzerland waxay dhakhso u qori karaan cannabis daawo ahaan. Soo jeedintan ka timid Golaha Federaalka waxay taageero badan ka heshay xisbiyada kala duwan ee siyaasada. Tani waxay keenaysaa in wax laga beddelo Sharciga Maandooriyaha.
Markii hore, bukaanku waxay u isticmaali karaan oo keliya xashiishadda ujeedooyin daweyn iyagoo rukhsad gaar ah ka haysta Wasaaradda Caafimaadka. Wax ka beddelka sharcigan awgood, xashiishadda ayaa dhowaan sidoo kale loo heli doonaa ujeedooyin caafimaad iyada oo laga helayo talobixinta dhakhtarka iyo qorista. Horumar weyn.
Kaydiyaasha xashiishadda ee 3 oo si weyn uga faa iideysanaya baahida sii kordheysa ee haramaha caafimaad ee Jarmalka
Maalqabeenkan 32-jirka ah ayaa noqday 'Steve Jobs'
Xashiishada iyo hal-abuurka: 3 shay oo lagu...